Soeda: Nivoaka gazety ny bilaogy ho an’ny Ramadany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Jona 2021 14:11 GMT
Amin'ity volana ity, hankalazaina any Soeda ihany koa ny Iftar , fifadian-kanina isan'andro mandritra ny volana Ramadany, ao amin'ny fiarahamonina mikasa ny handray ny fomba amam-panaon'ny “Soedoà vaovao” ary manao ezaka hanamarihana ireo andro fety Miozolomana.
Nanomboka ny bilaogin'ny Ramadany [amin'ny teny Soedoà] ilay gazety mpivoaka isan'andro faharoa lehibe indrindra ao Soeda, Svenska Dagbladet, izay ahitana ireo bilaogera sady mpino Miozolomana miisa telo, polisy iray, mpianatra iray ary mpisolovava iray, manoratra mikasika ny fiainany andavanandro mandritra ny volana masina. Ahitana ny zava-drehetra na tsara na ratsy ny lohahevitr'izy ireo ary mampiseho ny ezak'izy ireo hiaina toy ny mpino Miozolomana ao amin'ny fiarahamonina Soedoà ankehitriny.
Matetika manoratra ao amin'ny bilaogy iarahany, Betraktarens Öga (“Eo imason'ny olona mijery”) ireo bilaogera ireo.
Tsy hoe tsy misy disadisa ny fifandraisana eo amin'ny Miozolomana sy Soeda anefa azo heverina fa tsy noho ny fandeferan'ny Soedoà malaza izay tena hireharehan'ny Soedoà no hankalazana ny Ramadany ho an'ny daholobe any Soeda fa noho ny antony ara-barotra. Maro ny fivarotan-dehibe mivarotra hena halal ankehitriny, ary ireo sakafo hafa mifanaraka amin'ny fivavahana Miozolomana ihany koa, ary tonga hatrany amin'ny sehatra ara-barotra hafa io fironana io, ary hita ny ezaka atao amin'ny fanomezana fahafaham-po ho an'ny fangatahan'ny mpanjifa Miozolomana izay tsy mitsaha-mitombo ihany koa.
Omaly, namoaka lahatsoratra ilay bilaogera Cherin Awad momba ny fitsidihan'ny praiminisitra tany amin'ny toeram-pamonoana omby halal:
“Hitako fa nankany amin'ny toeram-pamonoana omby ny praiminisitra omaly (tsy dia betsaka loatra izany any Soeda). Mikasika ny Ramadany dia nilaza izy fa azo ampitahaina amin'ny herinandron'ny fifadian-kanina izany. Raha nanontaniana izy raha afaka mifady hanina toy izany ihany koa dia hoy ny navaliny hoe: “Raha tena nanapa-kevitra aho…” Mahafinaritra. Ireto no teboka tsara avy amin'ny mponina izay tsy manana fahatokisana intsony ny mpandala ny mahazatra. Tsara izany. (…) Handeha hiresaka kely aho, avy eo, rehefa kelikely, ny sasany aminareo mpamaky dia omena ny fahafahana ho Miozolomana ao anatin'ny andro ao anatin'ny vavaka, fifadian-kanina ary fitsidihana moskea. Saingy tsy an-tery ny fiovam-po. Wallah , mianiana aho! Vaovao misimisy kokoa momba ny fomba fandraisana anjara. Mety ho liana ny praiminisitra? ”
Anisan'ireo lohahevitra noresahin'ireto bilaogera ireto ny fandinihan'ny mpianatra Miozolomana Soedoà momba ny zon'olombelona sy ireo, voafonja ampijaliana ao Guantánamo ary ny fomba fanamboarana ny zava-pisotro mampatanjaka, hiatrehana ny volana fifadian-kanina. Mitantara ny lafiny rehetra amin'ny fiainana andavanandro mandritra ny Ramadany ireo lohahevitra ireo, mba hahafantaran'ny Soedoà shwei, shwei, tsikelikely izany.
Moa ve ireo bilaogera Soedoà mamindra fo araka ny fangatahan'ny fivavahana? Ny fahanginana mavesatra no hita tamin'ny ankapobeny. Eny e, tsy hoe tanteraka…
Nidera ny bilaogin'ny Ramadany vaovao ireo bilaogera ao amin'ny Homan Anwari och Semus toa an'i Mötesplatsen Fred. Fa i Jan Kallberg kosa nitsikera ity hetsika ity. Ho azy, mitovy amin'ny fanomezana alàlana ho an'ny evanjelista elatra ankavanana ho ao amin'ny sehatry ny haino aman-jery Soedoà laika mahazatra izany. Mandalo fitoniana ve isika amin'izao fotoana izao alohan'ny tafio-drivotra? Azo heverina…
Mirongatra ny tsy fandeferana sy ny fankahalana vahiny any Soeda, farafaharatsiny raha araka ny fakan-kevitra sy ny fanohanana ny antoko farany ankavanana. Vao ny alatsinainy 1 Septambra no nanomboka ny bilaogin'ny Ramadany, andro voalohan'ny tsinam-bolana, ary mbola ho avy ny fanehoan-kevitra maro.
Tena mety haharesy lahatra ny “teratany Soedoà” momba ny finoana Islamo ve ny fanoratana bilaogy momba ny Ramadany any Soeda? Sarotra ny miteny izany… Zavatra iray no azo antoka. Mbola ho ela vao hahay hanonona tsara ny fiteny hoe “Atyab at-tihani bi-munasabat hulul shahru Ramadan al-Mubarak” (fiarahabana amin'ny fanombohan'ny Ramadany) ireo Soedoà.
Tantaran'ny Soeda farany
Iràna 23 Mey 2019
Ejypta: Mpanao gazety iray hafa voaroaka
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 05 Janoary 2019